ရှမ်းအရှေ့ မိုင်းဆတ်မှာ ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်ပေမယ့် ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်မှု စတင်နေ
ရှမ်းအရှေ့ မိုင်းဆတ်မှာ ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်ပေမယ့် ကျ...
7 ธ.ค. 2562 - 17:40 น.
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်မြို့နယ်ထဲက မိုင်းခုတ်တိုက်နယ် အုပ်စုမှာရှိတဲ့ ရွာ ၈ ရွာမှာ ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက အခုအခါ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ဖို့ အတွက် မြေရှင်းလင်းတာတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဒေသခံတွေဟာ မူရင်းနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ရွာသူကြီး အစရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အဆင့်ဆင့်နဲ့ နေထိုင်တာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမယ့် အခု ကျောက်မီးသွေး ထွက်ရှိပါက မြေနေရာ ဖယ်ပေးရမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရှမ်းပြည်မြစ်ချောင်းများအတွက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့က စိုင်းခေးဆိုင်က ပြောပါတယ်။
မြေယာစမ်းသပ် တူးဖော်တာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အောက်တိုဘာ ၂၂ က ရွာသူရွာသား ၃၀ဝ ကျော်က မြေနေရာများ ကာကွယ်သောအနေနဲ့ ဆုတောင်းပွဲတွေ ပြုလုပ်ပြီး ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပေမယ့် နောက် နေ့ကစပြီး ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်မယ့် ထိုင်း ကုမ္ပဏီက အလုပ်သမားတွေဟာ ဝမ်ဝိန်းရွာရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ဧက ၃၂၀ဝ ကို စရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလက်ရှိ အနေအထားအရ ကျောက်မီးသွေးကို ရွာတစ်ချို့ မှာ စတင်တွေ့ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီရွာကနေ ဆက်စပ်ပြီး တခြားရွာတွေမှာပါ တူးဖော်ခဲ့ပါက မိမိတို့ရွာကနေ ပြောင်းရွှေ့ရမှာကို ဒေသခံတွေက စိတ်ပူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Sahakol Equipment Co.Ltd (SQ) နဲ့ မြန်မာရွှေရေကန် (Golden Lake Co.Ltd) တို့ ပူးပေါင်းပြီး မိုင်းခုတ်မှာ ၂၈ နှစ်ကြာ ဒီလို ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ဖို့ နှစ်ဦး သဘောတူညီချက် ခဲ့တယ်လို့ ရှမ်းပြည်မြစ်ချောင်းများအတွက် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့က ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းကနေ အမြတ်ငွေဟာ ထိုင်း ဘတ် ၂၇ ဘီလျံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၉၀) အမြတ်ရနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။
ထိုင်းဘက်က ဘတ်သန်း ၃၀ဝ စတင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာ ဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရရင်တော့ ထိုင်းက ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မြန်မာဘက်က ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်က လုပ်ကိုင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ဒေသခံတွေဘက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ ကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။
အခုလို တူးမယ်ဆိုရင် မိုင်းခုတ်ရွာ အပါအဝင် ရွာကြီးတွေထိခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဧက ၃၂၀ဝ ဟာ များလွန်းတဲ့ အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှာလည်း စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ဒေသခံတွေဘက်က သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို ကန့်ကွက်စာ တစောင် လက်မှတ်ကောက်ပြီး တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ထူးခြားမှု မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဝမ်ဝိန်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထိုင်းကု မ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ရွာသားတွေနဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး အစည်းအဝေး တစ်ခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ အစမ်းသဘောသာ တူးဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် အခု အချိန်မှာတော့ ကြီးကျယ်တဲ့ မြေယာ ရှင်းလင်းခြင်းတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစမ်းတူးဖော်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောခဲ့ပါတယ်
အခုတူးဖော်မယ့် ကျောက်မီးသွေးဓါတ်အားပေး စက်ရုံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၆၀ဝ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ထွက်ဖို့ ကျောက်မီးသွေးကို တန်ပေါင်း ၃ သိန်း စီစဉ်တူးဖော်မယ်လို့ ထိုင်းသတင်းရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို ရှမ်းပြည်မြစ်ချောင်းများအတွက် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရှမ်းအရှေ့ မိုင်းဆတ်မှာ ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်ပေမယ့် ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်မှု စတင်နေ